Ụdị Ndị Ndịàmà Jehova Bụ
Okpukpe anyị zuru ụwa ọnụ. O nweghịkwa okpukpe ọzọ e jikọtara anyị na ya. Ọ bụ eziokwu na isi ụlọ ọrụ anyị dị n’Amerịka, ọtụtụ n’ime anyị bi ná mba ndị ọzọ. Anyị karịrị nde asatọ n’ụwa niile. Anyị na-akụziri ndị mmadụ Baịbụl n’ihe karịrị narị mba abụọ na iri atọ. Ọ bụ Jizọs kwuru ka anyị na-eme ya. Ọ sịrị na “a ga-ekwusakwa ozi ọma nke a nke alaeze n’elu ụwa dum mmadụ bi ka ọ bụrụ àmà nye mba niile.”—Matiu 24:14.
Anyị na-erubere iwu obodo ọ bụla anyị bi na ya isi. Ma, anyị anaghị eso na ndọrọ ndọrọ ọchịchị n’ihi na Jizọs kwuru na Ndị Kraịst “abụghị nke ụwa.” Ọ bụkwa ya mere na anyị anaghị akwado ihe ọ bụla gbasara ịlụ agha. (Jọn 15:19; 17:16) Mgbe a na-alụ Agha Ụwa nke Abụọ, a tụdịrị ụfọdụ Ndịàmà Jehova mkpọrọ, mekpọọ ụfọdụ ọnụ, gbuokwa ụfọdụ maka na ha ekweghị aga agha. Otu onye bụ́bu bishọp na Jamanị dere, sị: “Ọ bụ naanị ha bụ okpukpe nwere ike ikwu na akọ na uche ha ekweghị ha gaa agha n’oge ndị Nazi na-achị Jamanị.”
“[Ndịàmà Jehova] na-akpa àgwà ọma. Ha anaghị achọ ihe ga-abara naanị ha uru. Ọ bụ ụdị ndị dị ka ha kwesịrị ịnọ n’isi ọchịchị. Ma, i mekataghị hụ aka ha n’ọchịchị. . . . Ha na-erubere ndị ọchịchị isi, ma, ha kweere na ọ bụ naanị Alaeze Chineke ga-eme ka nsogbu ụmụ mmadụ bie.”—Ihe a gbara n’akwụkwọ akụkọ a na-akpọ Nová Svoboda, nke a na-ebipụta na Chek Ripọblik.
Ma, anyị anaghị asọ ndị ọzọ asọ. Jizọs rịọrọ Chineke gbasara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Ihe m na-arịọ gị abụghị ka ị kpọpụ ha n’ụwa.” (Jọn 17:15) Ọ bụ ya mere na i nwere ike ịhụ ebe anyị na ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ, na-azụkọ ahịa ma ọ bụ na-agakọ akwụkwọ n’obodo anyị dị iche iche.
MBA NDỊ A KACHA NWEE NDỊÀMÀ JEHOVA
Amerịka 1,190,000 Meksiko 800,000 Brazil 770,000 Naịjirịa 330,000 Ịtali 250,000 Japan 220,000 Lee vidio Bekee aha ya bụ Special Convention in Israel, nke dị na www.jw.org, ka ị hụ otú Ndịàmà Jehova bụ́ ndị Izrel na ndị nke Palestaịn si na-emekọ ihe ọnụ n’agbanyeghị na mba abụọ a na-ese okwu. (Gaa n’ebe e dere ABOUT US pịa ebe e dere CONVENTIONS)
mailto:?body=Olee Ụdị Ndị Ndịàmà Jehova Bụ?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2015645%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Olee Ụdị Ndị Ndịàmà Jehova Bụ?